Malunga Nathi-Ningbo Yongxiang Plastics Industry Co., Ltd.
Ibhotile yempompo engenamoya
I-Ningbo Yongxiang Plastics Industry Co., Ltd lishishini lobuchwephesha elibandakanyeka ekuveliseni izitshizi zeplastiki ezahlukeneyo, iiplastiki, iimveliso ze-electroplating kunye nemveliso yezityalo, igxile ekuveliseni uthotho oluninzi kunye namakhulu eendidi ze-trigger sprayer, isitshizi sempumlo, isitshizi somlomo. Isitshizi senkungu kunye nempompo yelotion, njengomenzi oqeqeshiweyo obandakanyekayo ekudibaniseni ukupakishwa kwe-salon yobuhle, amayeza kunye neemveliso zokuvasa. Inezixhobo zokubumba ezigqwesileyo, isitofu sokubumba, indibano engenaluthuli kunye nokusebenza okuzenzekelayo, kunye nemveliso yemihla ngemihla ukuya ngaphezulu kwe-600,000. Iiyunithi zothotho lweemveliso.Iimveliso zithunyelwa eMelika, eJapan nakwamanye amazwe.
Inkampani ineseti ezipheleleyo zezixhobo zoyilo ezisusela kuyilo olulodwa lokungunda, ukuveliswa, ukuya ekubumbeni inaliti ngokuzenzekelayo, ukudibanisa kunye nokuvavanya kwaye ifumana abathengi basekhaya nabamazwe ngamazwe kunye neemveliso zayo ezisemgangathweni iminyaka emininzi ngokuthembela kubomi bayo kumgangatho wemveliso kunye nokuthatha ithuba lobuchwephesha bayo. .
Besisoloko sibambelela kumgaqo wethu "wokudala umgangatho ngokufanelekileyo nangokugqibeleleyo; ukwabelana ngophuhliso ngokuhambelanayo nangokuqhubekayo", ukuphuhlisa ngokuqhubekayo izinto ezintsha ngomoya wobuchwephesha, kwaye sizame ukwakha ishishini lamazwe ngamazwe kushishino lwesitshizi ngokuthembela kubuchwephesha obuphezulu kunye nezixhobo, umgangatho ophezulu wehardware kunye notyalo-mali lwesoftware kunye nomgangatho obalaseleyo.
Sithemba ngokunyanisekileyo ukusebenza namahlakani kuwo onke “kumazwekazi asixhenxe neelwandlekazi ezintlanu” sibambene.
Amashishini okupakisha isitshizi yobuchwephesha, izixhobo ezigqibeleleyo, italente ephezulu, ulawulo olunengqiqo, imveliso egqwesileyo technology.Dibana nolindelo lwabathengi beemveliso zeYongxiang. Sihlala sikholelwa kumandla okwenza into enye ngentliziyo yethu, vumela iYongxiang ivelise Ibangcono.
Iqela lentengiso eligqwesileyo, yazisa abathengi abaninzi iYongxiang, sebenzisa iimveliso zeYongxiang, uzive usemgangathweni wenkonzo kaYongxiang.
Asithengisi nje iimveliso, Nika ingqalelo ngakumbi kumava omsebenzisi!
Agasti 06, 2021
Imakethi yesitshizi sokutshiza iya kuqwalasela amathuba amahle okukhula kulo lonke ixesha lovavanyo luka-2021-2031 ngasemva kokunyuka kwesicelo esifikelelekayo ngenxa yeepropati zabo ezininzi.
Ukwanda kolwazi malunga nokwamkelwa kwe ...